केटीएमले ल्याउने भयो ४९० सीसीमा नयाँ मोटरसाइकल – Wow Sansar
केटीएमले ल्याउने भयो ४९० सीसीमा नयाँ मोटरसाइकल
January 1, 2021 68
काठमाडौं । केटीएमले ४९० सीसीमा नयाँ मोटरसाइकल निमार्ण गर्ने भएको छ । केटीएम मोटरसाइकलका सीईओ स्टेफन पेरेरले ४९० सीसी प्लेटर्फममा बजाजसँगको सहकार्यमा मोटरसाइकलमा निमार्ण गर्ने भएको हो ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
अष्ट्रियन कम्पनी केटीएमले बजाजसँगको सहकार्यमा बजाजको भारतस्थित पुने प्लान्टमा नयाँ मोटरसाइकल निमार्ण गर्ने जनाएको छ । हाल बजाजले केटीएमका लागि १२५ सीसीदेखि ३९० सीसीसम्मका सिंगल सिलिन्डर मोटरसाइकल निमार्ण गर्दै आएको छ । बजाजले हस्कभर्नासँग समेत सहकार्य गर्दै आएको छ । हस्कभर्ना केटीएम मोटरसाइकलको साहायक कम्पनी रहेको छ ।
नयाँ वर्षको शुरुवातमा नै कम्पनीले ४९० सीसी प्लेटफर्ममा नयाँ मोटरसाइकल निमार्ण गर्ने जनाएको छ । ४९० सीसी प्लेटफर्ममा एड्भेन्चर, स्ट्रीटफाइटर र फियर्ड मोटरसाइकल निमार्ण गर्ने अनुमान रहेको छ । उक्त ४९० सीसी इन्जिन हस्कभर्ना मोटरसाइकलमा पनि प्रयोग गर्ने अनुमान समेत गरिएको छ ।
हाल कम्पनीको पोर्टफोलियोमा ७९० सीसी र ८९० सीसीका मोटरसाइकल इपोर्ट गर्दै आएको छ । कम्पनीले निमार्ण गर्ने ४९० सीसी सेग्मेन्टको मोटरसाइकल ७९०सीसी तथा ८९० सीसीको डिजाइन प्रेरित हुने जनाइएको छ ।
कम्पनीका सीईओ स्टेफनका अनुसार ३९० सीसी सेग्मेन्टमा बाट अपग्रेड गर्न चाहाने ग्राहकललाई लक्षित गरेर ४९० सीसी प्लेटफर्ममा निमार्ण गर्न लागिएको छ । उनका अनुसार २०२२ सम्ममा यो मोटरसाइकल भारतमा सार्वजनिक हुनेछ । यो मोटरसाइकल पूर्णतः बजाजको भारतस्थित पुनेको आरएन्डडी सेन्टरमा हुनेछ ।
Prevघाँटीको दुखाई र टन्सिल भएर हैरान हुनुहुन्छ ? कतै क्यान्सर त भएको छैन ? कसरी थाहा पाउने ? समाधान के ?
Nextआज बढ्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् कति पुग्यो ?
हुँइकिदै आएको सेनाको गाडीले मोटरसाइकललाई ठक्कर दियो
कक्षा १२ को नतिजा कहिले आउँछ ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निकाल्यो अत्यन्तै जरुरी सूचना !
‘पारस’ मा नब नायिका आग्यासँग रोमान्स गर्दै अनमोल केसी